ဆွေးနွေးချက်:မြိုဟူသောဝေါဟာရ - ဝီကီပီးဒီးယား
မြို နှင့် မြို(မရူစား) သမိုင်းကြောင်း ရန်သေချာ တင်ပြစေလိုသည်။--James Khora (ဆွေးနွေး) ၁၄:၅၆၊ ၁၇ မေ ၂၀၂၀ (UTC) (လူမျိုးဆိုသည်မှာ တစ်မျိုး သာရှိစမြဲပါ ၊ လူမျိုးတစ်မျိုး မှာ နာမည် အခေါ် အဝေါ် အရေးအသားအမျိုး မျိုး ရေးသား ကြပါသည်။ မြိုလူမျိုး (၂) ဖြစ်ပေါ်လာရသည်မှာ အငြင်းပွားစရာပင် မူလမြို လူမျိုး နှင့် ခမီဘာသာစကားသုံးမြို တို့၏ အကြောင်းတရားကို လေ့ရန် အလွန်ပင် လိုအပ်ပါသည်။ မြို လူမျိုး (၂) မှာ ဘာသာစကားမတူ ၊ ယဥ်ကျေးမှု မတူ ၊ စာပေ မတူ ကြသည်ကိုတွေ့ရသည် ။ အဓိက ဆွေးနွေးချင်တာက ပိုမို သိတာထင်ရှား ရလွယ်ကူ စေသော အချက်က နာမည် အခေါ်အဝေါ် နှင့် ပထဝီ ၊ စာပေ ၊ ဘာသာစကား ပါ ။ မြို လူမျိုးတို့၏ အခေါ်အဝေါ် အမျိုးမျိုး ကို သိထားပြီး ဖြစ်၍ ၊ အဝခမီ ဘာသာစကားပြော မြိုဟု ခံယူကြသူများ တို့၏ အမည် နာမှ အမျိုးမျိုး လည်း ရှိပါသည် ။ အဝခမီ စကားလုံးဝေါဟာရအပြင် ခမွေး ဟူ၍ လည်းကောင်း ၊ ခမွီဟူ၍လည်ူကောင်း ၊ ခမိ ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခေမီ ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခွေးမြီးဟူ၍လည်းကောင်း ခမိ ဟူ၍လ်းကောင်း အမျိုးမျိုးအရေးအသားရှိ သော်လည်း သူတို့ကိုယ် သူတို့က ခမီ ဟု ခေါ်ဆိုကြပါသည် ။ မည်သည့် အသံဖြင့် မြိုဟု မထွက်နိုင်သည်ကို တွေ့ရသည် ။ အမှန်တရား အတွက် ဝီကီပီးဒီးယမ်း ကူညီပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေးလိုပါသည်။)Moyezan (ဆွေးနွေး) ၀၉:၅၆၊ ၁၈ မေ ၂၀၂၀ (UTC)
၁ မြိုလူမျိုး (၂) မြိုအကြောင်း ဆွေးနွေးလို
၂ ဤ မြိုလူမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
မြိုလူမျိုး (၂) မြိုအကြောင်း ဆွေးနွေးလိုပြင်ဆင်
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေရန် ဤနေရာတွင် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသော အရာများကို ကော်ပီ ပစ်ယူလာခြင်းဖြစ်သည် ။ကျေးဇူးတင်ပါသည်Moyezan (ဆွေးနွေး) ၁၂:၃၇၊ ၂၃ မေ ၂၀၂၀ (UTC)
၁။ မြိုလူမျိုး (မရူ ၊ မြူ) ..ဤ လူမျိုးသည် ရှေးဟောင်းလူမျိုး ဖြစ်ပြီး ပင်ကိုယ် ဘာသာစကား ၊ ပင်ကိုယ် စာပေ ၊ ပင်ကိုယ် ဘာသာတရား ၊ ပင်ကိုယ်တေးမှုတ်တုရိယာ ၊ ပင်ကိုယ်အမျိုးသားလက်ခဏာ နှင့် ရှိပြီး မိမိ ကိုယ် ကိုယ် ( မရူ၊ မြူ ) ဟု ခေါ်ပသည် ။ အဘယ်ကြောင်း မြို ဟု ဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုလျှင် (မြူ) ဟု အခြားတိုင်းရင်းသားများရခိုင်တို့က အသံမပီသားသောကြောင့် မြို ဟု ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ ကုလားတို့ က မြူဟုမပီသားသောကြောင့် မြုံ ဟု ခေါ်ဆို ကြသည်။ ဗမာတို့က ရခိုင်အခေါ် မြို ဟုခေါ်ဆိုခြင်းကို (မျို) ဟုအသံထွက်ဖြင့် ခေါ်ဆိုသည် ။ထို့ကြောင့်ပင် မြို လူမျိုးအပြင် မြုံ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ မြူ၊ မရူ ဟူ၍လည်းကောင်း ခေါ်ဆိုကြပါသည် ။ ဤ မြို လူမျိုး ကို မိမိအခေါ် ၊ နိစပ်ရာလူမျိုး အခေါ် ၊ နိုင်ငံခြားသားအခေါ်ဟူ၍ ရှိပါသည် ။ က။ မြိုလူမျိုးတို့၏ အမည်နာမမူကွဲဟန်စာလုးံပေါင်းအရေးအသားအမျိုးမျိုး ။ ဤနေရာတွင်မြိုလူမျိုးကို (၃) မျိုးဖြင့်ဖော်ပြရှင်းလင်းပါမည်။ မိမိအခေါ် ၊နီးစပ်ရာလူမျိုးအခေါ်၊ နေထိုင်ရာဒေသအခေါ် ၊နှင့် နိုင်ငံခြားသားအခေါ်ဟူ၍ အမျိုးမျိုးရှိရာ - နီးစပ် ရာလူမျိုး ရခိုင် နှင့် ဗမာတို့က မြို(Mro), မျို(Myo)ဟုခေါ်သည်။ နိုင်ငံခြားသားကုလားတို့က မြုံ (Murong)ဟုခေါ်သည်။ မိမိကိုယ် မိမိတို့က မရူ(Mru)ဟုခေါ်ပါသည်။ ဤ မြို(Mro),မြုံ(Murong),မရူ(Mru) အရေးအသားရပ် (၃)ခုမှ မူကွဲဟန်ရှိသော အရေးအသားအမျိုးမျိုး တစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်နုတ်ရလျှင်- ၁။ မြို(Mro)ဟူသော ဝေါဟာရအပြင် မြို့ဟူ၍လည်းကောင်း ၊မျိုဟူ၍လည်းကောင်း ၊ မြိုစာဟူ၍လည်းကောင်း၊ မြိုဆာ ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ဒတ်ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ တောင်မြို ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ တောင်မရိုဟူ၍လည်းကောင်း ၊လောင်းဟူ ဟူ၍လည်းကောင်း ၊တောင်မျိုဟူ၍လည်းကောင်း မူကွဲစာလုးံပေါင်းအရေးအသားအမျိုးမျိုးကိုတွေ့နိုင်သည်။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအလို- Mro are also known as Mroo,Moroo,Mro-cha, Mro-sa, Dak, Kuki(or)langye, Launghu, Taung Mro, Taung Moroo,Taung Myo written by differently the Mro(Mru) reffer to the tribe. ၂။ မြုံ(Murong) ဟူသော ဝေါဟာရအပြင် မြုန် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ မြုမ်ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ မရောင်ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ မြုံဂျာဟူ၍လည်းကောင်း မူကွဲဟန်စာလုးံပေါင်းအရေးအသား အမျိုးမျိုးကိုတွေ့နိုင်သည် ။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအလို - Murong are also known as Murung, Moorang, Morung written by differently the Mro(Mru) reffer to the tribe. ၃။မရူ(Mru) ဟူသော ဝေါဟာရအပြင် မြူဟူ၍လည်းကောင်း၊ မြူစာ ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ မရူစာဟူ၍လည်းကောင်း ၊ မြူဆာဟူ၍လည်းကောင်း ၊ မရူဆာ ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ တောင်မြူ ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ တောင်မရူဟူ၍လည်းကောင်း မူကွဲဟန်စာလုးံပေါင်းအရေးအသားအမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်သော်လည်း မြို(မရူ) လူမျိုးကိုပင် ရည်ညွန်းဖော်ပြသည်။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအလို - Mru are also known as Maru, Mru-cha, Maru-cha, Mru-sa, Maru-sa. Taung Mru, Taung Maru written by differently the Mro(Mru) reffer to the tribes.ေဖာ်ပြပါမူကွဲစာလုးံပေါင်းအရေးအသားအမျိုးမျိုးသည် မြိုလူမျိုး တစ်မျိုးကိုသာ ရည်ညွန်းဖော်ပြကြောင့် မိမိတို့အချင်းချင်းခေါ်ဆိုမှု မူလည်းကောင်း ၊ ရခိုင့်ရာဇဝင်သမိုင်း၊ မြန်မာ့ရာဇဝင်သမိုင်း ၊သုတေသနပြုစာတမ်းကြီးများ အခြားစာအုပ်မျာစွာက ထောက်ခံလျှက်ရှိပါသည် ။ ၎င်း မူကွဲဟန် စာလုးံပေါင်း အရေးအသားအမျိုးမျိုးများသည် ခမီလူမျိုး / မြို (ခေါ်)ခမိ (သို့မဟုတ်)မြိုခမိ(ယခုအခါတွင် မြိုဟုခံယူ)တို့နှင့် ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိသည်ကို မတွေ့ရှိပေ။
၂။ မြိုလူမျိုး ( အဝခမီ)...ဤ လူမျိုးသည် ရှေးဟောင်း လူမျိုး မဟုတ်ပေ ၂၀၁၄ မြန်မာ နိုင်လုံး သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူပြီးသည့်နောက်မှ သူတို့ကိုယ် သူတို့ ရှိရင်းစွဲ မြို လူမျိုးနေရာကို လုယူနေခြင်းဖြစ်သည်ကို အချိန်အနည်းငယ်ပေးပြီးလေ့လာလျှင်ပင် ခြွဲခားနိုင်ပါသည် ။ ၄င်းတို့သည် ပ.ဆ.လ ဟုခေါ်သော မြိန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ၁၉၅၉-၆၀ ခုနှစ်ကနေ မိမိခမီလူမျိုးကို ပယ်၍ မြို လူမျိုး ခံယူလာကြသည်။ မိမိခမီလူမျိုးကို ပယ်ရသည့်အကြောင်းတရားသည် ပလက်ဝ က ဦးထက်လှိုင်သည် ခမီနာမည်ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်၍ မဲအဖြတ် နိုင်၍ ရခိုင်တောင်တန်းကနေ ခမိလူမျိုးခံပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လို့မရသောကြောင့် မြိုလူမျိုး နှင့် ခမီ လူမျိုး လူမျိုးနှစ်မျိုး လူဦးရေအင်အားကို ယူ၍ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ခဲ့သည် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ၍ တရားဝင် ပါတီ တည်ထောင်နိုင်ခဲ့သည် ။၄င်းပါတီအမည်သည် မြိုခေါ်ခမိ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးပါတီ ဖြစ်သည် ။ ယင်းအချိန်တွင် မြိုခေါ်ခမိ တိုင်းရင်းသားဟု ခံယူနေကြသည် ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူပြီးနောက် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် မြိုအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီပါတီ နှင့် မြိုတိုင်းရင်းသား ဖွံ့ဖြိုရေးပါတီ ဟူ၍ ပါတီ နှစ်ခု ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်ချိန်မှစ၍ မြိလူမျိုးဟု ရှိရင်းစွဲ မြိုလူမျိုးနေရာတွင် နေရာယူလာကြခြင်းဖြစ်သည် ။ ၄င်းတို့မှာလည်း ဘာသာစကား ၊ စာပေ ရော အက်ခရာဖြင့် တီထွင်ထားတာရှိသည်။ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု သီးခြားရှိပါသည် ။ ယခုအချိန်မှာ မြိုလူမျိုးခံယူထား၍ မြိုလူမျိုးသမိုင်းကိုအခြေခံကာ မြိုလူမျိုးဟု ခံယူကြခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ သီးခြားမှုပိုမို သိသာစေ၍ရန် မိမိအခေါ် ၊ နိစပ်ရာလူမျိုးအခေါ် နှင့် နိုင်ခြားသား အခေါ်အဝေါ် အမျိုးမျိုးရှိကြသည် ပါသည် ။ ဤအချက်ဖြင့် ၄င်းတို့သည် မြိုလူမျိုး ဟုတ်၏ မဟုတ်၏ ကို လေ့လာကြည့်သော်-ခမီလူမျိုးတို့၏အမည်နာမ စာလုးံပေါင်းအရေးအသား မူကွဲဟန်အမျိုးမျိုးကို ဖော်ပြရာတွင် ခမီ (၃)အုပ်စု ဖြင့် ဖော်ပြမှသာလျှင် ပြည့်စုံပေမည်။ ၁။ အရိုင်းခမီ(ခူမီး) ၂။ အဝခမီ (ခမီ) ၃။ မြို(ခေါ်)ခမိ (သို့မဟုတ်)မြိုခမိ (ယခုအခါ မြိုဟုခံယူ) တို့၏ မိမိအခေါ် ၊နီးစပ်ရာလူမျိုးအခေါ် ၊နေထိုင်ရာဒေသအခေါ် နှင့် နိုင်ငံခြားသား အခေါ်ဟူ၍ အမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်သည် ။ ယင်း (၃)အုပ်စုတို့၏ လူမျိုးအမည်နာမ မူကွဲဟန်စာလုးံပေါင်း အရေးအသားအမျိုးမျိုးတို့မှာ ထပ်တူရှိကြောင့် တွေ့ရပေမည် ။ ၁။အရိုင်းခမီ(ခူမီး) ဟူသောဝေါဟာရအပြင် တွေ့နိုင်သော အရေးအသားများမှာ အရိုင်းခမီ၊ ခမွီး(ခူမီး) ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခူမီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခွေးမွေးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခမီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခွေးမြီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ခမွီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခမွေ ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခမွီ ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ကုလာတန်ခူမီး ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ စာလုးံပေါင်းအရေးအသားအမျိုးမျိုးကို တွေ့နိုင်သည် ။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအလို - Ahraing(Khumi) are also known as Ahraing Khami, Kwemyi(Khumi), Khumi, Khwemyi, Khami(Khumi) , Khami, Khamee, Kumi, Khwemye, Kami, Khwe-mee, Kwemi, Kaladan Khumi, Eastern Khumi,Hkamie written by differently the Khumi reffer the tribe. ၂။အဝခမီ(ခမီ) ဟူသော ဝေါဟာရအပြင် တွေ့နိုင်သည့် အရေးအသားအမျိုးမျိုးများမှာ ခမွီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခမွေ ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခမွီဟူ၍လည်းကောင်း ၊ အဝခမီဟူ၍လည်းကောင်း၊ ခွေးမြီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ဝါကုန်းဟူ၍လည်းကောင်း ၊ဘကုန်းဟူ၍လည်းကောင်း၊ ခမီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခမီဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခေမွီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ စာလုးံပေါင်းအရေးအသားအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း ခမီလူမျိုးကိုရည်ညွန်း ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ အလို- Awa(Khami) are also known as Khamyi, Khemyi, Khami, Khimi, Kami, Khwe-myee, Khwemyi, Kwemi, Vakung, Wa kung, Khamee, written by differently the Khami reffer to the tribes အဝခမီ (ခမီ) ရိုးရာဝတ်ဆင်မှု ၃။ မြို(ခေါ်)ခမိ (သို့မဟုတ်)မြိုခမိ (ယခုအခါမြိုဟုခံယူ) ဟူသော ဝေါဟာရ အပြင် ခမွီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခမွေးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ အဝခမီဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခမိဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ဝါကုန်းဟူ၍လည်းကောင်း ၊ဘကုန်းဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခွေးမွေးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခမီးဟူ၍လည်းကောင်း ခမီဟူ၍လည်းကောင်း၊ ခွေးမြီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခေမီး ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အရေးအသားအမျိုးမျိုးကိုတွေ့နိုငိသည် ။ သူတို့ကိုသူတို့ ခေါ်သည့်အခါမှာ ခမီ ဟုခေါ်သည်။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအလို Mro-Khami are also known as Khamyi, Kamyi, Awa Khami, Kami, Wa kung, Va kung, Khwemyi, Khamee, Khimi, Khwe-mee, Kimi, written by differently the Khami reffer to the tribe. မြို(ခေါ်)ခမိ (သို ့မဟုတ်) မြိုခမိ (ယခုအခါမြိုဟုခံယူ) ဝတ်ဆင်မှုသည်ေဖာ်ပြပါ ခမီ (၃)အုပ်စုတ ွင် အမည်နာမ စာလုးံပေါင်း အရေးအသား အမျိုးမျိုးသော ခမီွီး ၊ ခမီး ၊ ခမိ၊ အဝအခမီ ၊ အရိုင်းခမီ သည် ဤ (၃)အုပ်စုတွင် ထပ်တူရှိကြောင်းတွေ့ရသည် ။ ယင်းသို့ လူမျိုးအမည်နာမ ထပ်တူသည်မှာ လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းမှ ဆင့်သက် ဆက်နွယ်လာမှုရှိသော လူမျိုးစုမှာသာ တွေ့နိုင်သည် ။ ထို့အပြင် ပထဝီနယ်မြေ တူသည် ။ဘာသာစကားပြောဆို ဆက်စပ်မှု ၇၀% ကျော် တူညီကြောင့်လည်းလေ့လာတွေ့ရှိသည် ။ သို့ဖြစ်လျှင် ရခိုင့်ရာဇဝင်သမိုင်းကျမ်း ၊ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း ၊မြန်မာ့သမိုင်း စာအုပ် များနှင့် သုတေသနပြုစာတမ်းကြီးများတွင် ပါရှိသော ခမွီး ၊ ခမီး ၊ ခမိ ၊ အရိုင်းခမီ ၊အဝခမီ စာလုးံပေါင်း အရေးအသားအမျိုးမျိုးသည် ဤ (၃) အုပ်စု ကို ရည်ညွန်း ပြကြောင့် တွေ့ဆနိုင်ပေသည် ။ မြို (Mro) ,မရူ(Mru) ,မြုံ( Murong) အမည်နာမတို့နှင့်ကား ဤခမီ (၃)အုပ်စု တို့နှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိသည်ကို မတွေ့ရှိပေ။Moyezan (ဆွေးနွေး) ၁၀:၀၀၊ ၁၇ မေ ၂၀၂၀ (UTC)
ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ မြိုလူမျိုး စာနှာ တစ်ခု နှင့် ရှေးဟောင်းမြိုလူမျိုး စာမျက်နှာ တစ်ခု ဝီကီပီးဒီးယား စာမျက်နှာ ပေါ်တွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် အကြောင်းအရာကို အခြေခံ၍ အမှန်တရား သိစေရန် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည် ။
ဤ မြိုလူမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပြင်ဆင်
(ဤမြိုလူမျိုးခမီဘာသာစကားပြော အုပ်စုဖြစ်သည် မြို(မြူ)ဘာသာစကားခါ် နကုန်း သို့မဟုတ် ဝါကုန်း၊ မြို(ခေါ်)ခမီ ဟုခံယူသူများ) ဝါးမျိုသည့် လူမျိုးစု တစ်စုက ဘယ် အုပ်စုလဲ၊ ဘယ်အချိန်က မြိုလူမျိုးဟုစတင်ခံယူကြသလဲ ဆိုသည်ကို ဖော်ပြရန် လိုပေမည် ။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ် တွင် မြန်မာ နိုင်ငံတော်ကြီးကို တိုင်းပြု၊ ပြည်ပြု ရန် စတင် လှုပ်ရှားပြီး လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရခိုင်တောင်တန်းဒေသ ဟုသတ်မှတ်၍ ချင်းပြည် နယ်ကိုလည်းချင်းဝိသေသတိုင်းဟုသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှတိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးပြုပြီးကာလသည်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်ရေစီခေတ်ရေစီးကြောင်းသို့ကူးပြောင်းချိန်သည်လက်ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်အလားတူပင်၊ယခင်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းလွှတ်တော်တွင်အမတ်လောင်းတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ရပ် ကျင်းပပြီး ပြည်သူတို့ရဲ့ အသည်းကြားက မဲတစ်ပြား နဲ့ တင်မြှောက်သည့် ယခုကာလတူဖြစ်သည်။ထိုအချိန်ခါသော်လည်းကောင်း၊ယခုလက်ရှိအရသော်လည်းကောင်း၊ပလက်ဝ၊ကျောက်တော်၊မြောက်ဦး၊မင်းပြား၊ (မြောက်ပိုင်း) တစ်ဆက် ပလက်ဝ၊ ကျောက်တော်၊ ပုဏားကျွန်း၊ရသေးတောင် ၊ဘူးသီးတောင် စသည်ဖြင့် နယ်မြေ တစ်ဆက်တည်း လူမျိုးတစ်စုတည်း ရှိနေ၍ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပလက်ဝ မှဦးထပ်လှိုင်း(ခမီ)ကမဲအများဆုံးဖြင့် ရခိုင် တောင်တန်း ဒေသဟု သတ်မှတ် ချိန်တွင် ရခိုင်တောင်တန်းဒေသ အထူးကိုယ်စားပြု အနေဖြင့် ပထမ ဦးဆုံး လွှတ်တော်အမတ် လောင်းနေရာ ကို ကျောက်တော်မြို့မှ ဦးကြာလှအောင် (ရခိုင်) အား မဲအပြတ် အနိုင်ရခဲ့သည် ဟု သိရသည်။ရခိုင်တောင်တန်းဒေသမှ တစ်ချို့သော ရခိုင်များသည် အခုအချိန်မှာ ခမီက အမတ်တစ်နေရာ ရထားပြီဆိုလျှင် နောက်နှောင် ကျရင် ကျွန်ုပ်တို့ ရခို်င်တောင်တန်းဒေသကို ရခိုင်တွေမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘဲ ခမီတွေ အုပ်ချုပ်မှာ စိုးရိမ်၍ ဗိုလ်ကြီးကြာလှအောင်သည် (ယခင်က) ကျောက်တော်မြို့မှ ခမီလူမျိုးများကို စကားစဆိုလေသည်မှာ ပလက်ဝ က ဦးထပ်လှိုင်း သည် ခမီလူမျိုးဖြင့် ပါလီမန် အမတ် ဖြစ်သွားပြီ ငါတို့ ကျောက်တော် က ခမီတွေ အမတ်တစ်နေရာ လိုချင် ရချင်ရင် ခမီလူမျိုးခံယူလို့မရနိုင်တော့ဘူး ၊ပလက်ဝ က ဦးထပ်လှိုင်းရသွားပြီ ဒီတော့ ကျောက်တော်က မြို့နယ်လုံး ခမီတွေ အကုန်လုံးမြိုခံရန် တိုက်သွန်းသည်ဟုဆိုပါသည်။ တဖန် ခေတ်ကာလ တူ မြောက်ဦးမြို့နယ်တွင်လည်း ဆရာတော် ပညာသီဟ သည် မြောက်ဦး မြို့နယ်မှ ခမီ လူမျိုးတွေ ကိုခေါ်ကာ တကာတို့ ဘာသတင်းတွေသိကြ၊ ကြားကြရပြီလေ ဟုမေးကာ ကိုယ်တော်ကတော့ ကျောက်တော်မြို့မှာ ခမီ တစ်မျိုးလုံး မြို လူမျိုးပြောင်းသွားပြီ လို့သတင်းကြားရတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်တော် တို့မြို့နယ်က ခမီတွေ က ခမီလူမျိုးဘဲ ခံရမည်၊ ကိုယ်တော်လည်း ရခိုင်မဟုတ်ဘူး ခမီ လူမျိုး(ကဆိန်) အမျိုး ကျောင်းတိုက်ရွာမှဦးအာဝင်အမျိုးခံ၍ပြောကြားခဲ့လေသည်။ကျောက်တော်မြို့နယ်မှဗိုလ်ကြီးကြာလှအောင်နှင့် မြောက်ဦးမြို့နယ်မှ ဆရာတော် ပညာသီဟ တို့သည် ခမီလူမျိုးကြားတွင် တစ်ဦး ကို တစ်ဦး ကြည့်မရ သလိုလို ၊စကားပြောကြရာမှာသော်လည်းကောင်း မသင့်မြတ် သလို ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ၁၉၅၈-၅၉ ခုနှစ် တွင် ကျောက်တော်မြို့ ဦးကြာလှအောင်(ရခိုင်) နေအိမ််််််််််တွင် မြိုဟူ သော ဆိုင်းဘုတ်ကို ခမီလူမျိုး ကိုယ်စား တင်လေပြီ (မြိုဆိုင်းဘုတ်) တင်အခမ်းအနား တွင် ဆရာတော် ဘဒ်ဘန ကလျာဏ (ပျံလွန်တော်မူ) နှင့် ဦးမောင်အေးဝင်း ဖခင်အမည် မသိ (သက်ရှိ) ငါးတန်ယော်ကော် (ဒေသအခေါ် အမည်တိကျမဆိုလို) သူတို့ နှစ်ဦး အား ဝါဆိုမီကျောင်းတိုက် ဆရာတော် အဂဂမဟာ သဒ္ဒမ္မဇောတိကဓဇ ဘွဲရ ဆရာတော် ဘန္ဒန်ဘခနိ္တစာရ (သက်ရှိ) မှ ကျေွးတာစား၊ ပြောတာကိုမှတ်ယူဟု ပြောကြားစေလွှတ်ခဲ့သည် ဟု သိရသည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ် ကျောက်တော် ခမီ လူမျိုးကို မြို လူမျိုးခံစေပြီး မြိုခံသော ခမီကို ပါတီ ကောင်စီဝင် လူကြီးမြှောက်တင်ပေးခဲ့သော မျက်နှာ ကြောင့် လွှတ်တော်တစ်နေရာ ၊ အမတ်လောင်း ရနို့နို့ နဲ့မြိုခံလာတာ ယခုပင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၀-၇၀ ခုနှစ် တွင် ကျောက်တော်မြို့တွင် ခမီလူငယ် ဘော်ဒါ ဆောင်ဟု ရှိပြီး ၊မြောက်ဦးမြို့တွင်လည်း ခမီလူငယ် ဖံွ့ဖြိုးရေးအသင်းဟု မိမိ လူမျိုးအမှန်ကို အခြေခံ၍ မိမိလူမျိုး ပညာရေးအတွက် မိမိလူမျိုးအမည်ဖြင့် အမှီသဟဲ ဆောက်လုပ်ထားကြသည်မှာ ယ္ခုကတည်းကနေ ခမီလူမျိုးသိသိသာသာ ပြောနိုင်ပါသည်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် ခမီတစ်မျိုးသားလုံးမှ အသိစိတ်ဖြင့် ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တခနီ္တစာရ၊(တိလောက၊ကလျာဏ)(ပျံလွန်တော်မှု)နယကဆရာတော်များနှင့်ခမီလူမျိုးတစ်ရပ်လုံးပါဝင်သော ညီလာခံ တစ်ရပ်ပြုလုပ်သည်မှာ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ လောင်းရှည်ချောင်းကျေးရွာ တွင် အဆိုပညာရှင်၊ အတီးအမှုတ်ပညာရှင် ၊အက ပညာရှင်ဖြစ်ကြသော ဒုံကြီးရွာသား၊အဝပြင်ရွာသား(အမည်မသိ)နှင့် ပြွန်တိုကျေးရွာမှ ဦးအောင်ခင် တို့မှ ခမီအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု တစ်ရပ်ကို ဖော်ပြနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ လက်ရှိ ခမီအမျိုးသားနေ့ကိုှ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့ကို သတ်မှတ်ကျင်းပလာသည်မှာ (၇) ကြိမ်မြောက်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ၊တော်လှန်ရေးအရေးအခင်း ကာလ နောက်ပိုင်း ၁၉၈၉-၉၀ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်မှ လူမှုရေးအသင်း အဖွဲသော်လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း သော်လည်းကောင်း၊ မည်သည့်အသင်းအဖွဲပါတီမဆို ၂၀၀၈ ၊အခြေခံဥပဒေ သစ်ရေးဆွဲ ဖွဲစည်းရန် ခေါ်ချိန် တွင် ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊လောင်းရှည်ချောင်း ကျေးရွာတွင်ဆုံးဖြတ်ချက် ကို အခြေခံ၍ ကျောက်တော်ဘက်လည်းမြိုခံ၍ရအောင်နဂိုခမီလည်းပါဝင်အောင်ဆိုပြီးဥပဒေသစ်ရေးဆွဲရာတွင် တက်ရောက်ရန် မြို(ခေါ်)ခမီ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အသင်းတစ်ခု ဖြစ်တည်လာခဲ့သည်။ ဤ သို့ဆိုလျှင် မြို(ခေါ်)ခမီ ဆို ဘယ်လိုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာရသလဲ ဆိုဒါ ရှင်းနေပြီဖြစ်သည်။ ထပ်၍ ဘယ်ခုနှစ်လောက်က ခမီလူမျိုး မှ မြို လူမျိုးသို့ ခံယူလာကြသလဲ ဆိုသည်ကို ဖော်ပြရန်လိုပေမည်။
(က) ၁၉၆၂ ခုနှစ် တော်လှန်ရေးကော်စီအာဏာရလာသောအခါကျောက်တော်နယ်မှ``မြို``လူမျိုးအမည်ခံမြို့နယ်ကော်စီဝင်် အချို့က ခယင်ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်မှ ခမီလူမျိုးကိုဖျက်၍ ``မြို``လူမျိုးခံယူမှသာ ဝန်ထမ်းတစ်နေရာတွင်အလုပ်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။(ခ)ယနေ့ထိကျောက်တော်နယ်နှင့်မြောက်ဦးနယ်မြောက်ပိုင်းအတွင်းနေထိုင်ကြသော``မြို``တိုင်းရင်းသားများအဖြစ်ဟုနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်များတွင်တွေ့ရှိရပါသည်။ဤမျှလောက် ဆိုလျှင် မြို(ခေါ်)ခမီ သို့မဟုတ် မြို ခေါ် ခမီ သို့မဟုတ် မြို(ခ)ခမီ သို့မဟုတ် မြိုခမီ ဆိုသူများသည် မြို မဟုတ်ကြောင့် ထင်ထင် ရှား ရှား ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ပေါ်လွင်ပြီဖြစ်သည်။Moyezan (ဆွေးနွေး) ၀၄:၁၂၊ ၃၀ မေ ၂၀၂၀ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆွေးနွေးချက်:မြိုဟူသောဝေါဟာရ&oldid=517701" မှ ရယူရန်
စာမျက်နှာ "မြိုဟူသောဝေါဟာရ" သို့ ပြန်သွားရန်။
၃၀ မေ ၂၀၂၀၊ ၀၄:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ မေ ၂၀၂၀၊ ၀၄:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။